Ogaden News Agency (ONA) – Mudane Faarax Macallin oo kashifay cudurka dili doona Somaali
Mudane Faarax Macallin oo kashifay cudurka dili doona Somaali
Posted by ONA Admin	/ February 24, 2014
Qofka siyaasiga ah ee Somali u nasab sheegta ee dhagaysta hadalkii gaabanaa ee mudane Faarax Macallin uu ka jeediyay shirka uga socda Nairobi machadka AGA ee Af-Soomaaliga oo aan dareemin khatarta uu sheegay mudane Farax Macallin inay ku foorarto umadda Somaliyeed, waxaa xaqiiqa ah inuu yahay kuwa uu tilmaamay ee u shaqeeya Itobiya.
Hadday dhabtahay maahmaahda caalamiga ah ee tidhaahda –Cudurka ku haya oo la garto waa kala badh daawayntiisa – Faarax Macallin wuxuu ku dhawaaqay hadal ay hubaal tahay inay dhamaan aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Somalida ay wada arkaan hasa ahaatee intooda badan ay ka cabsanayaan inay afka soo mariyaan.
Mudane Faarax Macallin waa nin siyaasi ah oo xog-ogaal ah oo inbadan ku dhex jiray ama agtaagnaa jikada lagu karinayo siyaasadaha umadda Somaliyeed lala maagan yahay. Wuxuu la socda waxyaaba badan oo laga yaabo in aanay ogayn Somalida. Wuxuu ogyahay heerka cadawtinimada Itobiya ay gaadhsiisan tahay iyo waxay la maagan tahay Somali.
Ma’aha hadal la dhayalsan karo oo si sahlan inta loo maqlo looga gudbi karo xogta dhabta ahee uu sheegay mudane Faarax Macallin. Qaar badan oo goobta uu ka hadlayay fadhiyay waxaa hubaal ah inuu waxay ogaayeen un goobta ka sheegay hasa ahaatee aanay ku dhicin inay afka soo mariyaan.
Mudane Faarax Macallin wuxuu tilmaamay oo dhab ah inay siyaasiyiinta Somaliyeed dhamaantood noqdeen dalaaliin iyo jawaasiis u kala adeegaya Itobiya ama Kenya, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay dabar go’ooda sababtoo ah buu yidhi; waxay Somalida ku dhex jiraan laba mujtamac oo Toban jeer ka badan, waxayna dagaan Somalida dhul aad u balaadhan khayraad badanna uu ku jiro, sidaa daraadeed hadaanay xajisan waxaa dhici doonta 30ka sanee soo socota in laga waayo qof Somali ah Geeska Afrika, ayuu si cilmiyaysan oo xog-ogaalnimo ah uga waramay Faarax Macallin isagoo sheegay inuu socod ku maray dhamaan dhulka Somalidu dagto marka laga reebo buu yidhi Ogadenya oo gaagaabta ii diideen, siduu hadalka u dhigay.
Wuxuu amaanay M/weyne Cumar Geelle oo uu ku sheegay inuu ahaa aabaha machadkan mideeyay Somalida, taasoo dhab ah, hasa ahaatee M/weyne Cumar Geelle wuxuu ka mid yahay maanta kuwa Itobiya ay gacanta ku hayso oo waliba dambi aan sinaba looga cafiyi doonin aduun iyo aakhriba ka galay dad Somali ah oo dalkiisa ku soo cararay, kadib markuu u gacan galiyay Itobiya oo qaar badanoo ka mid ahaa dhalinyaradii uu dhiibay aan loo ogayn meel ay ku sugan yihiin.
Waxaan soo qori doonaa ood la socon doontaan warbixno aan ka hayno siyaabihii loola dhaqmay dhalinyaradii laga qabqabtay Jabuuti, say ula socdaan siyaasiyiinta uu ka midka yahay mudane Faarax Macallin.